Izindlela Ezi-7 Zokusebenzisa Umhubhe Wakho Wokuguqula Okuku-inthanethi | Martech Zone
Abakhangisi abaningi kakhulu bakhathazeke ngokweqile ngokwanda kwethrafikhi kumasayithi abo kunokuguqula ithrafikhi abanayo. Izivakashi zifika kusayithi lakho nsuku zonke. Bayayazi imikhiqizo yakho, banesabelomali, futhi bakulungele ukuthenga… kepha awubahehi ngomnikelo abadinga ukuguqula.
Kulo mhlahlandlela, UBrian Downard we-Eliv8 ikukhombisa igxathu negxathu lokuthi ungakha kanjani ifaneli yokuthengisa ezenzakalelayo ongayisebenzisa ukukhulisa amandla okukhula ebhizinisi lakho usebenzisa ifomula elula eyizinyathelo ezi-7.
Umkhiqizo / Imakethe Fit - Qinisekisa ukuthi umkhiqizo owumakiselayo ulingana nezithameli ezihlosiwe ozithandayo.
Khetha Umthombo Wakho Wethrafikhi - Thola umthombo omuhle kakhulu wethrafikhi bese ushayela ithrafikhi ethe xaxa kusuka kuleyo mithombo.
I-Magnet okuhola - Nikeza isipho esingenakuphikiswa ongasinika ikhasimende lakho MAHHALA ngokushintshisana ngemininingwane yabo yokuxhumana.
Uhambo lwentambo - Nikeza isipho esingenakuphikiswa, esinikezwa ngamathikithi aphansi kakhulu (imvamisa phakathi kuka- $ 1 no- $ 20) esisetshenziselwa ukuguqula imikhondo ibe ngamakhasimende.
Ukunikezwa Okubalulekile - Manje njengoba usuguquliwe, khuphuka futhi unikele ngomkhiqizo noma ngenkonzo eyi-Core.
Inzuzo ye-Maximizer - nikela nge- isikhwama lokho kufaka izinto ezisezingeni eliphansi neziphansi ndawonye.
Buyisa Indlela - letha abathengi abangathengi emuva kufaneli yakho ngokusungula amaphuzu wokuthinta amasu nabo ku-inthanethi.
Tags: UBrian Downardukuguqulwa kokuhlelwaokunikezwayo okuyisisekeloI-ELIV8khulisa ukuguqulwaumlenze wokuholaukumaketha kufanelekileukumaketha kwemingceleukulingana komkhiqizoukumaketha komkhiqizoinzuzo maximizerbuyisela indlelaimithombo yomgwaqoucingo lwentambo